မုဒြာရဲ့ ခေါ်သံ ကြည့်ရတာ မမိုက်ပါဘူးဗျာ - MoviesFan
မုဒြာရဲ့ ခေါ်သံ ကြည့်ရတာ မမိုက်ပါဘူးဗျာ
ကဲ ခီခီတို့ရဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ…. ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ကစတင်တဲ့ မုဒြာရဲ့ ခေါ်သံကို ကြည့်ပြီးကြပြီထင်ပါတယ်နော်။ ဘယ်လိုတွေများ မြင်မိကြလဲဗျာ.. မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ရော ဘယ်တော့သွားကြည့်ဖို့များ စီစဉ်ထားလဲဗျ?
အက်မင်ကတော့ အေးအေးဆေးဆေးကြည့်ရအောင် တင်တင်ချင်းသွားမကြည့်ပဲ တနင်္ဂနွေနေ့မှ သွားကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ အေးဆေးလားမအေးဆေးလားဆို တစ်ရက်တည်းကို နှစ်ကားပြိုင်ကြည့်လိုက်တယ်လေ (အေးရော 😂) ပြိုင်ကြည့်တယ်ဆိုလို့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ရွှေကြာနဲ့ပြိုင်ကြည့်တယ်မထင်ပါနဲ့နော်။ အချစ်ကလေး Alicia ရဲ့ Tomb Raider ကားလေးကြည့်မိတာပါ။ အထင်လွဲမခံနိုင်ဘူးလေ 😂
အင်ထရိုဝင်တာအရမ်းများသွားပြီ မုဒြာခေါ်သံ ကြည့်ရတာ မမိုက်တဲ့ အကြောင်းလေး ဆက်လိုက်မယ်နော်။
ကိုယ်တွေက မုဒ်အပြည့်နဲ့ခံစားတော့မယ်လို့စျာန်သွင်းနေတုန်း ဇာတ်ကားလဲစပြီး ခဏနေရော “အေ့” ဆိုပြီး အကျယ်ကြီး လေချဉ်တက်သံကြီးထွက်လာတာဗျား ဘေးနားကပ်ရပ်မှာထိုင်နေတဲ့ အန်တီကြီးဆီကဗျ။ တစ်ခါတည်းလားဆိုတော့ ရုပ်ရှင်ပြနေတဲ့ တလျှောက်လုံး မပြတ်တမ်းကိုပဲ။(ကိုယ်က အဲ့လိုလေချဉ်တက်တာမျိုးဆို ရွံတာထက် အရမ်းမုန်းပြီး ဒေါသတွေထွက်တာထွက်တာဆိုတာလေ😠😡 ) ဒါပဲလားဆိုမပြီးသေးဘူး မောင်ရေ့။ ဘိုလိုပြောလို့ မြန်မာစာတန်းထိုးရင်လဲ အဲ့တာတွေကို အသံထွက်လိုက်ဖတ်သေးတာ။ ပြီးရင် အင်း ဟုတ်ပ ဘာညာဆိုပြီး သူမှတ်မိလိုက်တာတွေကို ဘိုလို repeat လိုက်လုပ်သေးတာဗျား 🤭
ဒီလောက်နဲ့ ပြီးသွားပြီ မထင်နဲ့ခမျ။ ဖုန်းသံကြီးထမြည်လာတော့ အမလေးတွေတပြီး သူ့ဖုန်းကို ဖြေသေးတာ။ “ဟင်းဟင်း Mudras calling ကြည့်နေတာလေ အခုရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ ပြီးမှ ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်နော်” ဆိုတာကပါသေး။ ပြန်ခေါ်မယ့်ဟာ ဘာလို့ဖြေနေသေးမှန်း စဉ်းစားမရ🙄။ အဲ့ဆိုတော့ သူ့နားမှာထိုင်နေရတဲ့ ကိုယ်တွေမှာ ဖီးလ်ပျက်တာပေါ့ဗျာ…. တချိန်လုံးဘေးနားကနေ ဘိုစာတွေရွတ်လိုက် စာတန်းထိုးတွေလိုက်ဖတ်လိုက်နဲ့ လုပ်နေတာ။ စစတုန်းကတော့ ရယ်ချင်တာပေါ့လေ …. တချိန်လုံးလိုလိုအသံတွေထွက်နေတာကျတော့ စိတ်ကသိကအောင့်ဖြစ်လာရောဗျား…..
ဇာတ်ကားအကြောင်းကတော့ အားလုံးလဲ review တွေဖတ်ပြီးသားဖြစ်မှာဆိုတော့ အထွေအထူးမရေးတော့ပါဘူးလေ။ Deception ကြည့်ဖူးတဲ့လူဆိုရင်တော့ ပိုသိမှာပါ။ အားလုံးပြောပြောနေကြတဲ့ အတိုင်းပါပဲ.. ဇာတ်ကအေးတယ်၊ တချို့အခန်းတွေကတော့ ခုခေတ်အရဆိုရင်လက်ခံဖို့ခဲယဉ်းတယ်၊ ဇာတ်ပို့ဖြစ်တဲ့ နုနုဟာ မလိုအပ်ဘူးလို့လဲပြောလို့ရသလို သူ့အတွက်နေရာအဲလောက်ကြီးမရဘူးလို့လဲပြောလို့ပါတယ်။ တစ်ခုပြောချင်တာက ပုဂံသုသေသနလုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ နုနုက တစ်ခွန်းမှမဟပဲ လှယဉ်ကျေးကချည်းဒိုင်ခံပြောသွားတော့ နဲနဲထောက်ပြစရာဖြစ်သွားတာပဲ။
အဓိကမင်းသမီး လှယဉ်ကျေး သရုပ်ဆောင်တာကိုတော့ တော်တော်သဘောကျမိပါတယ်။ ဘိုသံကိုအာရုံထားနေတော့ သရုပ်ဆောင်ဘက်မှာ အားနည်းနည်းလျော့သွားတယ်လို့လဲ မြင်မိတယ်။ ဇာဏ်ခီကတော့ အားလုံးသိထားတဲ့ အတိုင်း ကောင်းနေတော့ အထွေအထူးပြောနေစရာမလိုတော့ဘူးနော်။ ငြိမ်တဲ့ကားတွေမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တောင် ပုရိသတ်ကိုထည့်တွက်ပြီး စေတနာပါပါနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ကားလေးတစ်ကားဖြစ်တာကြောင့် သွားကြည့်သင့်တယ်လို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ဆိုတာ အတူကြည့်မယ့်သူငယ်ချင်းကိုရွေးချယ်လို့ရပေမယ့် အတူထိုင်ရမယ့်လူကိုရွေးချယ်မရတဲ့အမျိုးဆိုတော့ ပြောရတော့ အခက်သားပဲလေ….. အခုမြင်ရမိသလောက်ဆိုရင် ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ စကားအကျယ်ကြီးပြောတာ၊ ဖုန်းကြည့်နေတာ၊ ဖုန်းပြောနေတာမျိုးတွေကို ရှောင်ပြီး ကိုယ့်အမှိုက်တွေကို စည်းကမ်းတကျစွန့်ပစ်တာမျိုးကလဲ မဖြစ်မနေ လုပ်သင့်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေလို့ခံယူမိပါတယ်။ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ကြည့်သူတွေအနေနဲ့လဲ ကားကောင်းတွေကိုရွေးချယ်ကြည့်တတ်လာတဲ့နေရာမှာတင်ရပ်မနေပဲ တကယ့်ကို နိုင်ငံကြီးသားပီသစွာနဲ့ တဖက်သားအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရအောင် ဂရုထားတတ်ဖို့လဲ လိုအပ်ကြောင်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချင်ပါတယ်။
မုဒြာရဲ့ ခေါ်သံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အက်မင်ကတော့ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ ဖီးလ်အကြီးကြီး ငုပ်ခဲ့ရခြင်းကြောင့် ဒီကားကြည့်ရတာ မမိုက်ဘူးလို့ ဆိုလိုက်ရတာပါဗျာ 😅😂
Previous Post: KPOP လောကရဲ့ ဦးနဲ့ခေး စုံတွဲတွေနဲ့ အသက်ရွယ်ကွာခြားမှုပေါ်မှာထားတဲ့ သူတို့ရဲ့ခံစားချက်များ…
Next Post: Jennifer Lawrence ကို SPY တစ်ယောက်အနေနဲ့ မြင်တွေ့ရမယ့် Red Sparrow